မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 26
ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ရန်ကုန်မြို့တနေရာတွင် မြင်တွေ့ရသည့် ကြော်ငြာဘုတ်တခု သစ်သားချောင်းများဖြင့် ပြုလုပ်သော ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များနေရာတွင် နိုင်ငံခြားကြော်ငြာလုပ်ငန်းများ ၀င်ရောက်လာပြီး သံပိုက်များ၊ သံဟင်ဂလန်ဖြင့်ပြုလုပ်သော ယနေ့လမ်းဘေးများတွင် စိုက်ထူးထားသည့် ကြော်ငြာဘုတ်ကြီးများအသွင်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းမှ မိမိကျွမ်းကျင်ရာဖြင့် နေရာရှာဖွေပြီး သင့်တော်သောနေရာတွေ့ရှိပါက စိုက်ထူနိုင်ရန်အတွက် ရှေးဦးစွာမြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မီတီသို့ ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံရပါသည်။ စည်ပင်သာယာရေးဌာနအဆင့်ဆင့်မှ စစ်ဆေး စားသောက်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့်ကျသောအခါ စည်ပင်သာယာရေးကော်မီတီမှ သတ်မှတ်သောအခွန်အခများကိုပေးသွင်းပြီးမှ တည်ဆောက်တပ်ဆင်ရပါသည်။ ကြော်ငြာလိုသော လုပ်ငန်းရှာဖွေပြီး ငှားရမ်းခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရပါသည်။ ကြော်ငြာလုပ်ငန်း၏သဘောသဘာဝ အကြမ်းဖျဉ်းဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ခန့်က ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဖြစ်သော ဦးအောင်သိန်းလင်းသည် ပြည့်စုံလုံလောက်သော အကျိုးအကြောင်းမရှိပဲ စည်ပင်ခွန် တိုးရန်ဟုဆိုကာ ရန်ကုန်မြို့မှ လူစည်ကားသောနေရာကောင်းမှ ကြော်ငြာဘုတ်များကို စည်ပင်ခွန်ပေးသွင်းရန်နောက်ကျသည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် လေလံတင်ပြီး လက်သင့်ရာကိုလွှဲပေးခဲ့ပါသည်။...
မောင်လူဝေး ဧပြီ ၇၊ ၂၀၁၂ ပြီးခဲ့သောတရက် နှစ်ရက်ကလားမသိ ..မလေးရှားအစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် နာဂျစ်ဦးဆောင်သောအစိုးရအဖွဲ့နှင့်အတူ မလေးရှားလုပ်ငန်းရှင်များ လည်း တအုပ်ကြီးလိုက်ပါသွားသည့်သတင်းကို မလေးရှားတီဗွီ TV.3 ချယ်နယ်မှလည်းကောင်း၊ အင်တာနက်သတင်းဝက်ဆိုက်ဒ်များ မှတ ဆင့် ကြားလိုက်မြင်လိုက်ရသည်။ ကျနော့်မိတ်ဆွေတဦးမှလည်း ကျနော့်ထံသို့ ညဖက်ကြီး ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလေသည်။ အကိုရေ ..မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ် မြန်မာပြည်ကိုသွားပြီဗျ..တဲ့။ ကျနော်သိလိုက်သည်။ ဟုတ်မယ်..ဗျ။ သူတို့က မြန်မာပြည်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက် သွားတာပါ။ မြန်မာ ပြည်သူပြည်သားများအတွက် ဘာမှဝမ်းသာစရာမရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ ဒီမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ တပိုင်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက လူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက် သွားတာပါလို့ ကျနော် ဖုန်းထဲကနေပြန်ပြောလိုက်မိတယ်။ တကယ်လည်း မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ အတွက်မပါ ပါဘူး။ မလေးရှားအစိုးရဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီအရေးကို ထောက်ခံပါတယ်လို့ ၀တ်ကျေ တန်းကျေ...
မီးဘေးသင့်သူများ အမိုးအကာ အရေးတကြီးလိုအပ်နေကြောင်း ရွှေခြင်္သေ့ လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ နှိုးဆော်စာ၊ ဧပြီ ၄၊ ၂၀၁၂၊ မိုးမခပေးစာကဏ္ဍ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ၀င်းကုန်းရွာတွင် မတ် ၂၉ ရက်နေ့ ကမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်ခြေ ၄၀၀ ကျော်ရှိသည့်အနက် ၂၈၅ အိမ်လောင်ကျွမ်းသွားပါသည်။ မီးဘေးသင့်သူများတွင် အမိုးအကာမရှိဖြစ်နေရာ မိုးပါရွာနေပါ၍ ဒုက္ခရောက်နေကြပါသည်။ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေလည်း ခက်ခဲနေပါသည်။ ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ရွှေဘိုမြို့ ရွှေမြန်မာ စိုက်ပျိူးရေးဆေးဆိုင်မှ သွားရောက်လှူဒါန်းမည်ဖြစ်သဖြင့် ပူးပေါင်း ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူများ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကိုအောင်ဇော်မျိုးဦး (ရွှေမြန်မာ စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းဆိုင်၊ ဈေးတောင်ဘက်၊ ရွှေဘိုမြို့။) ဖုံး -09 2210592 ရွှေခြင်္သေ့လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ ရွှေခြင်္သေ့ကျောင်း၊ ရွှေဘိုမြို့။ ဖုံး 09 47060145, 092100091 (ဓာတ်ပုံ...
မဲဆောက်သားလေး (မြန်မာပြည်)။ မိုးမခသို့ ပေးစာ မတ်လ ၂၅၊ ၂၀၁၂ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အလုပ်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာအလုပ်သမားများကို ထိုင်းအစိုးရနှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ သဘောတူညီချက်အရ ပတ်စ်ပို့ပြုလုပ်ရန် လုပ်ဆောင်ကြပြီး ပတ်စ်ပို့များပြုလုပ်စေပါသည်။ ထို့သို့လုပ်ဆောင်ကြရာဝယ် အစိုးရရုံးသို့ တိုက်ရိုက်သွားရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောသူများအတွက် ပတ်စ်ပို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အ တွက် ပွဲစားကုမ္မဏီများဖွင့်ပြီး လုပ်ဆောင်ပေးကြရာတွင် တစ်ဦးလျှင် ထိုင်းဘတ်ငွေ ၅၅၀၀ အနည်းဆုံးဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ မှန်မှန် ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ကြသည့်ကုမ္မဏီမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး မမှန်မကန် ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်း လိမ်လည့်လှည့်ပတ်ပြီး လုပ်စားနေကြ သူက များပါတယ်။ အခုရက်ပိုင်း စုံစမ်းရသလောက်ကတော့ အမှန်တစ်ကယ် ကြုံတွေခံစားနေရသူတစ်ဦးရဲ့ရင်ဖွင့်သံကတော့ “ကျွန်တော်တို့မှာ နေထိုင်ခွင့် လက်မှတ်အစစ်နဲ့ ပတ်စ်ပို့တင်လိုက်တယ်။ ဘန်ကောက်ရုံးဆိုတဲ့ဆီကကျလာတဲ့စာရွက် အများခေါ် (သုံးကွက်ကျား) တံဆိပ်တုံးအနီရောင် အ၀ိုင်း ပါရှိပါတယ်။ နေထိုင်ခွင့်ရဲ့ကျောဘက်မှ ပါလာတာတွေရပါတယ်။ နံပါတ် ၁၃...
၈၈ မျုိးဆက်၊ Generation Waves နဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်များက ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ကွန်ယက် ထုတ်ပြန် မိုးမခထံပေးစာ၊ မတ် ၂၅၊ ၂၀၁၂ လက်ခံရရှိတဲ့ ပေးစာအရ အထက်ပါခေါင်းစဉ်နဲ့ ဧပြီ ၁ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေး၊ သတင်းစုဆောင်းရေး၊ ထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ ဖြန့်ချိရေး ဆက်သွယ်နိုင်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၂၇ ဦး စာရင်းနဲ့ လိပ်စာများ ပြည်သူလူထုထံ ပေးပို့ ဖြန့်ဝေလိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
မိုးမခစာဖတ်သူ ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၄၊ ၂၀၁၂ မိုးမခ၀ိုင်းတော်သားများ စာရှည်ရှည်မရေးနိုင်ဘူး၊ တိုတိုပဲ ရေးလိုက်မယ်။ မိုးမခကာတွန်းဘောက်စ်က ဆရာတွေ ကာတွန်းဆွဲချင် ဆွဲပါ။ ရန်ကုန်မှာ မိုးပျံတံတားတွေ ဆောက်မယ်လို့ ပြောတယ်။ မိုးမပျံသေးခင် တံတားနဲ့ မလွတ်တဲ့ သစ်ပင်တွေကတော့ အရှင်းခံရတော့မယ်။ ခုတ်မိန့်ကျခံထားရတဲ့ အပင်တွေမှာ လိမ္မော်ရောင် လည်ပတ်တွေ စည်းထားတယ်။ သေမိန့်ကျတဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို ခွဲထားသလိုမျိူး မြင်မိတယ်။ ရန်ကုန်မှာ နာဂစ်ကျတော့ သစ်ပင်တွေစတေးခံရတယ်။ မြို့အနာသက်သာတယ် ပြောကြတယ်။ အခု သစ်ပင်တွေဟာ မိုးမပျံသေးတဲ့ တိုင်းပြည်က မိုးပျံတံတားတွေအတွက် ဖြိုလဲခံရဦးမယ်။ ပြီးတော့ ဇာတ်နာအောင် ပြောရရင် စည်းစရာရှားလို့ လိမ္မော်ရောင် အ၀တ်တွေ စည်းထားတယ်။ သင်ကန်းစတွေ လိုပဲ စိတ်ထဲက မြင်နေမိပြန်တယ်။ မြန်မာပြည်ကြီး...
အရှင်ဝီရသူ မတ်လ ၂၄၊ ၂၀၁၂ ၂၂.၃.၂၀၁၂-ရက်နေ့ မွန်လွဲ (၁) နာရီတွင် စာရေးသူဦးဆောင်သော ၀တ်ပြုဆုတောင်းရေးအဖွဲ့ ဘုရားကြီးသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဘုရား ကြီးမြောက်မုခ်မှ အရှေ့စောင်းတန်းသို့ဝင်ခါနီးတွင် တာဝန်ခံဆရာတော်သုံးပါးက “ခဏစကားပြောချင်လို့” ဟုဆိုကာ ဂေါပကရုံးခန်းထဲ ခေါ်သွားပါသည်။ ဆရာတော်သုံးပါးအနက် ဘဒ္ဒန္တသီဟနာဒဘွဲ့အမည်ရသောဆရာတော်က လေးစားရည်မွန်စွာမေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ ‘ဆူပူအုံကြွမှု မဖြစ်စေချင်ပါ’ ‘အရှင် ဘုရားကို ယုံပါသည်’ ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။ စာရေးသူကလည်း ‘စိတ်ချပါဘုရား’ ‘တပည့်တော်တာဝန်ယူပါသည်ဘုရား’ ‘တပည့်တော်လည်း ဆူပူအုံကြွမူကို မလိုလားပါဘုရား’ ဟု ပြန်လျှောက်ထားရာ၊ ဆရာတော်သုံးပါးလုံးက ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြုလုပ်ရန် သဘောတူကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဆရာတော်များက ဗီနိုင်းကိုင်ဆောင်မည့်ကိစ္စကို မေတ္တာရပ်ခံတားမြစ်ပါသည်။ စာရေးသူက အစိုးရကိုဆန့်ကျင်သည့်စာများ မပါကြောင်း၊ အကျဉ်းသားဓာတ်ပုံနှင့် အကျဉ်းသားတို့၏မိသားစုတို့ခံစားမှုများသာ ရေးသားထားကြောင်းလျှောက်ထား၍ ဗီနိုင်းများ...
ပေးစာကဏ္ဍ မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၁၂ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မန္တလေးခရီးစဉ်မှစ၍ ရဟန်းပျိုများ၏ နိုင်ငံရေးတက်ကြွစွာဆောင်ရွက်မှုများ အင်တာနက်၊ ဂြိုဟ်တုစလောင်း စသည့်သတင်းများ၌ ကျယ်ပြန့်စွာ တွေ့ရှိရပေသည်။ ဒီမိုကရေစီကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးကို လိုလားတောင့်တခြင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လိုလားတောင့်တခြင်း စသောအခြေခံအကြောင်းတရားများကြောင့် တစ်ပွင့်တည်းသောကြယ်၊ တစ်ခုတည်းသော အိမ်မက်ဖြစ်သည့် “အောင်ဆန်းသွေးဇာနည်” ကို အင်တိုက်အား တိုက် ထောက်ခံကြိုဆိုကြခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော် လူငယ် (ရဟန်းပျို) များဖြစ်သည့်အလျောက် စိတ်ခံစားမှုကိုဦးစားပေးကာ ပါးမှာစတေကာကပ်ခြင်း၊ နဖူးစည်းခြင်း၊ အလံကိုင် လွှင့်ခြင်း၊ ဗီနိုင်းများထောင်ခြင်း၊ ဓာတ်ပုံများမြှောက်တင်ခြင်းများပြုလုပ်၍ လွန်လွန်ကဲကဲ အားပေးလာကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရပေသည်။ မီဒီယာများကလည်း လွန်ကဲသောအားပေးမှုများကိုသာ ဦးစားပေးဖော်ပြကြသဖြင့် ကျန်ရဟန်းသံဃာများ ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်ရလောက် အောင် ဣနြေ္ဒပျက်၊ အရှက်မဲ့စွာအားပေးမှုများကို တကမ္ဘာလုံးက သတိထားမိကြပေသည်။ “လူဆိုသည်မှာ...
မိုးမခ ပေးစာ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၁၂ ၂၂၊ ၃၊ ၂၀၁၂ ရက်နေ့ မဟာမြတ်မုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး ရှေ့တော်မှောက်တွင်ကျင်းပမည့် ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၁၊ ၃၊ ၂၀၁၂ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ (၂) နာရီတွင် မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားလာပါသည်။ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီး (သို့) သာသနာရေးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံတင်ပြပြီးမှပြုလုပ်ရန်နှင့် မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီး သြဝါဒါစရိယဆရာတော်ကြီးများ၏ခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှ ပြုလုပ်ရန် စာဖြင့်ညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ညွှန်ကြားစာရသည်နှင့်တပြိုင်နက် ဘုရားကြီးသြဝါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီးများထံခွင့်တောင်းဖို့သွားရာ ဘုရားကြီးတိုက်လယ်ပေါ်ကျောင်း ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တကာရုညက “လုပ်လို့လည်း မတိုက်တွန်းဘူး။ မလုပ်နဲ့လို့လည်း မတားမြစ်ဘူး” ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။ မြတောင်ကျောင်းတိုက် ရွှေဝါဝင်းဆရာတော်ကြီး ဘုဒ္ဒန္တသာသနာဘိဝံသက “ဆန္ဒမစောဖို့နှင့် အချိန်သင့်ကခွင့်ပြုမည်” ဖြစ်ကြောင်း မိန့် တော်မူပါသည်။ ဘုရားကြီးသြဝါဒါစရိယ အများစုမှာ သက်တော်ရှည်ဆရာတော်ကြီးများ ဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ...
မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၂ ၁၉၊ ၂၊ ၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းစာများ၌ပါရှိသော ဦးဂမ္ဘီရသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အရှင်ဝီရသူ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် (၂၀၊ ၂၊ ၂၀၁၂) ၁၃၇၃ ခု၊ တပိုတွဲလဆုတ် (၁၃) ရက်။ (၁) (က) ဦးဂမ္ဘီရသည် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းများ ချမှတ်ထားသောကျင့်ဝတ်ဥပဒေများကို လျစ်လျူရှုခဲ့ပါသည်။ တ ရားဝင်လျှောက်ထားတင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူနိုင်ပါလျက် ဥပဒေမဲ့ပြုမူခဲ့ပါသည်။ သင်္ကန်းပြန်ဝတ်သည်ကို နားလည်ပေးနိုင်သော်လည်း ချိပ်ပိတ်ထားသည့်ကျောင်းများကို သော့ဖျက်ဝင်ရောက်ခြင်းသည် ဘုရားသားတော်တို့၏အပြုအမူမဟုတ်သလို၊ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်း လည်းမကျပါ။ ဒီမ်ိုကရေစီကိုလိုလားသူ၊ ဒီမိုကရေစီကိုချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်းသည် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျဆောင်ရွက်ဖို့ လွန်စွာလိုအပ်ပါ သည်။ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်မျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သုံးကြိမ်တိုင် စာဆင့်ခေါ်ပါလျက် ရုံးတော်သို့ မသွားရောက်ခြင်းသည် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကို မလေးစားရာကျသလို မထီမဲ့မြင်ပြုမူရာလည်း ရောက်ပါသည်။...